RASMI: Kiiskii Saddexaad ee Korona Fayras oo laga helay kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 31 Luulyo 2021. Real Madrid ayaa soo saartay bayaan rasmi ah, si ay ugu dhawaaqdo in xiddig cusub oo ka tirsan safka kooxda uu ku dhacay caabuqa Korona Fayras.
Los Blancos ayaa war rasmi ah ay soo saartay, isla markaana lagu daabacay website-keeda waxay ku sheegtay:
“Real Madrid waxay ku dhawaaqeysaa in laacibkeeda Álvaro Odriozola laga helay caabuqa Korona Fayras.”
Waxaa loo qorsheeyay in Odriozola lagu karantiilo gurigiisa, oo uu raaco tilmaamaha caafimaadka, si uu u maro dhowr baaritaano kale si loola socdo xaaladiisa.
Álvaro Odriozola waa ciyaaryahanka saddexaad ee Real Madrid, oo laga helay caabuqa saf mareenka ah ee Korona Fayras, tan iyo markii ay kooxda ka soo laabatay fasaxa kaddib dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana kaga horeeyay xiddigaha kala ah David Alaba iyo Karim Benzema.
Si kastaba ha ahaatee, Álvaro Odriozola ayaa u dhaqaaqay Real Madrid xagaagii 2018, isagoo ka yimid Real Sociedad qiimo lacageed dhan 30 million euros, laakiin waxaa ku adkaatay inuu helo fursad dhab ah uu kaga qayb qaato kulamada Los Blancos.